Dziviriro pazasi pemutengo: Día, BBV, Acerinox | Ehupfumi Zvemari
Chengetedzo pazasi pemutengo: Día, BBV, Acerinox
Ichi chiitiko chitsva chemusika wemasheya chakabuda neakateedzana ehunhu nemitengo inokwezva uye izvo zvinogona kugamuchira zvakanyanya kutenga mumwedzi iri kuuya. Ivo vanopa kushomeka mumitengo yavo iyo inokurudzira yavo yekuongorora mikana kuti ive yepamusoro pane zvakajairwa. Mune zvimwe zviitiko zviri pamusoro pe20% uye izvo zvinogona kuumba yakaenzana kwazvo mari yekudyara yepakati nepakati.
Imwe yehunhu hwechengetedzo dzekuenzana dzeSpanish ndeyekuti, nekuda kwechimwe chikonzero kana chimwe, kukosha kwavo kwakadonha zvakanyanya mumakore apfuura. Nekuderera kwakasimba kwazvo mukusimba kwavo uye izvo zvasvika pamadonhwe pamusoro pe50%. Izvi zvakagadzira kuti izvi zvirevo zveSpanish stock market ndizvo zvinonyanya kubatsira kubva ikozvino. Nekuti ivo vanouya kubva kune akanyatsogadzikana mitsara yebhizinesi uye pamusoro pezvose zvakasimbiswa mumisika yemari.
Iri kirasi rekuchengetedzeka rinogona kunge rakaumba pasi mumutengo wavo uye kuti chinhu ichi chinofanirwa kukanganisa kutanga kwenyaya inokwira inozovatungamira kuti vadzore mitengo yavo yekutanga. Chero zvazviri, ivo vanoumba chaiyo bhizinesi mukana wekuita iyo kuchengetedza kunobatsira kubva zvino zvichienda mberi. Ivo zvakare vanopa mashoma njodzi zvine chekuita nekuderera kunogona kukura mukati megore idzva remari. Nedzimwe tsika senge idzo dzatiri kuzokufumura zvinotevera.
1 Underweight masheya: BBVA
2 Yakakomba kudonha muZuva
3 Acerinox pane 9 euro chipingamupinyi
4 Naturhouse pamazinga akaderera kwazvo
Underweight masheya: BBVA
Pasina mubvunzo, iri boka rezvemari nderimwe remakesi akajeka pamusoro pehunhu huri pasi pemutengo wavo. Hazvishamisi kuti yakarasikirwa nehafu kukosha kwayo mumakore mashoma, ichibva pa9 kusvika kune mashanu euros pamugove. Kuderera kunogona kushandiswa nevashambadzi vadiki nepakati kuti vatore zvinzvimbo. Nekuti kubva zvino zvichienda vanozove nekuwedzera kwakanyanya mukana wekutarisazve kupfuura pakutanga, kunyangwe paine kushaya simba kwavo mumisika yemari.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti ine purofiti padyo ne4%. Mune mamwe mazwi, iwe unozogona kugamuchira yakatarwa uye yakavimbiswa mari gore rega rega, zvisinei nekushanduka kwayo mumisika yemakero kubva panguva dzino chaidzo. Icho chisarudzo chakajeka kana uchizochengetedza zvigaro zvako mukureba kwenguva uye hazvigone kutongwa kuti pane imwe nguva munguva unokwanisa kudzosera 9 euros pamasheya ayo ayo akanyorwa makore mashoma apfuura.
Yakakomba kudonha muZuva
Kana paine kukosha kwakasarudzika nekusimba kwekudonha kwayo, izvi hazvisi zvimwe kunze kweiyi cheni yekuparadzira. Iwe haugone kukanganwa kuti mune pfupi nzvimbo yenguva yakabva pakutengesa pa6 euros kusvika pakubata yuniti yeyuro sezviri kuitika panguva ino. Kuve imwe yeanorangwa zvakanyanya eiyo sarudzo inosarudzika yemusika weSpanish wemusika, iyo Ibex 35. Iko simba rekutengesa rakashamisa vese vamiririri vemari `nekuda kwehunhu hwayo hwakakosha. Yakarasikirwa inopfuura makumi mashanu muzana kukosha kwayo nekuda kwematambudziko ekambani ekuwedzera. Nedonho rakakosha kwazvo mumutengo wakanangwa wakapihwa nevamiriri vezvemari vakasiyana.
Nekudaro, chakanakisa chinhu pamusoro peichi chiitiko ndechekuti iwe unogona kutenga Masheya ezuva pamakwikwi emitengo. Kune rimwe divi, zvakaoma kwazvo kuti mitengo yavo inogona kudonha zvakanyanya kubva panguva ino chaiyo. Chero bedzi zvikaita zvirinani gore rino, hazvisi zvakanyanya kuomarara kuti inogona kudzikisira uye kutosvika padyo nechipingamupinyi chainacho pa3 euros. Nezvo iwe unenge uine zvishoma kupfuura makumi mashanu% kuongororazve uye izvo zvinogona kukutungamira kuti uwedzere zvakanyanya chiyero cheakaundi yako yekuchengetedza. Pamusoro pezvimwe zvekufunga nezvehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva pakakosha maonero.
Acerinox pane 9 euro chipingamupinyi
Iyo yekuSpain simbi inogadzira ndeimwe yeakakundwa zvikuru nemitengo yenyika sezvo mitengo yayo isati yadzora kubva pamatanho akagadzirwa mudambudziko rehupfumi. Mukufungidzira yaifanira kunge yakawana nhanho nguva ino isati yasvika uye kuti yaive pakati pegumi nemana negumi nemana euros pamugove. Kusiyana nemumwe wake mudanho reArcelor, iro, kune rumwe rutivi, rakapfuura mune pfupi nzvimbo yenguva kubva pa13 kusvika kune anopfuura makumi mairi euros, mune yakakura uptrend iyo yakaunza mabhenefiti makuru kune vanoita mari.
Acerinox inofanirwa kuendesa iyi nhanho uye saka ndiyo imwe yekuchengetedzeka pamusika weSpanish wemusika une mukana mukuru mukuwongorora kwayo. Kunyangwe ichokwadi zvakare kuti yakafemerwa mune imwe yemakambani emusika wemasheya ine njodzi huru uye kuti kusagadzikana ndechimwe chezvinhu zvikuru zvakajairika muukoshi hwakakosha hweIbex 35. Semhedzisiro yemaitiro aya, inogona kusimuka zvakanyanya nekukurumidza kupfuura mune mamwe maitirwo atakaburitsa.
Naturhouse pamazinga akaderera kwazvo
Imwe nyaya yakakosha ndeiya inomiririrwa nekambani iyi yakanyorwa pamusika weSpanish unoenderera. Nemamiriro ekuda kuziva kuti ikambani yeSpain inopa mugove wakanyanya kune vagovana. Iine purofiti padyo ne10% uye izvo zvinobvumidza varimi kuti vave nemari yakakwira kwazvo uye yakavimbiswa gore rega rega. Kunyangwe mumakore achangopfuura haina kuperekedzwa nekotesheni mumitengo yayo, iyo yakadzika kusvika kumatanho asingaonekwe mumakore mashanu apfuura.
Asi panguva ipi neipi shanduko yemafambiro inogona kuitika uye mune ino mamiriro ayo ongororo yekuwedzera inodarika kukosha uye inogona kuve mukana wakakosha webhizinesi kune vanoita zvehasha zvakanyanya mumisika yemari. Kunyangwe zvichizotora nguva kuzadzisa zvinangwa izvi. Chero zvazvingaitika, ndeimwe yetsika idzo dzinofanirwa kuchengetwa padhara mugore rino ratichangotanga. Semhedzisiro yemaitiro aya, inogona kusimuka nekukurumidza zvakanyanya kupfuura mune mamwe maitirwo atakafumura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Chengetedzo pazasi pemutengo: Día, BBV, Acerinox
Mhedzisiro pamusika wemasheya? Kwete, mune mari yekudyara
Registry yeIntra-Nharaunda Vanoshanda muSpain